Banyere Anyị - Cangzhou Jinglong Technology Co., Ltd.
Cangzhou Jinglong / Telex (Hong Kong) abụwo onye isi ụlọ ọrụ na ọnụnọ mba ụwa ọkachamara na imepụta na ire ngwaahịa ngwaahịa maka njikwa pesti na obodo, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nhazi nri, ụlọ na anụ ụlọ.
Anyị ụlọ ọrụ e hiwere na 2000 na nwere ya osisi bi ebe karịrị 5,000 square mita emi odude ke Dongguang County, Cangzhou obodo, Hebei Province, China. Companylọ ọrụ anyị nwere ndị ọrụ karịrị 60 ọrụ, gụnyere ndị ọkachamara ama ama, ndị ọrụ ntanetị, na ndị ọrụ akụrụngwa.
Cangzhou Jinglong / Telex (Hong Kong) nwere nkewa nkewa nke na - arụpụta ngwaahịa ndị na - arụ ọrụ igwe (nnụnụ nnụnụ, ọdụ ụgbọ mmiri na ọnyà, wdg) iji gboo mkpa nke ndị ahịa ụlọ na ndị ofesi.
Akụkụ nke abụọ nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ndị na-eweta ụlọ a tụkwasịrị obi ma na-enye ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụhụ na gburugburu ụwa ngwaahịa dị elu. Enwere ike ibufee ngwongwo ọnụ n'ime akpa zuru ezu iji chekwaa ụgwọ ibu maka gị.
Ugbu a, anyị nwere otu ndị akwadoro nke ọma iji duzie ma na-enyere ndị ahịa anyị aka maka mkpa ha ahaziri iche.
Mgbe niile maka uru gị!
Nabata na JINGLONG
Jinglong na-arụ ọrụ na ngosipụta mba ụwa kwa afọ nke ụlọ ọrụ na-achịkwa pesti.
Nwere ike ịchọta Jinglong (Telex) na EXPOCIDA IBERIA, FAOPMA, Parasitec Paris, Pest Italy-Disinfestando, Pest Protect, Pest EX, wdg.
Anyị ga-achọ ịnụ site na ndị enyi ochie anyị na nke ọhụụ banyere mkpa ha.
Vingkwalite ngwaahịa anyị na ịnye ọrụ ahaziri iche bụ ihe Jinglong lekwasịrị anya.
Jinglong enwetala ISO9001: akwụkwọ asambodo 2015 na Ọnọdụ Ọnọdụ Ebe Ọrụ ka akwadoro site na Intertek.